Rasaasa News – Maamulka Somaliland oo Ciidamo u Diray Gabalada Salal iyo Awdal
on December 13, 2011 12:00 am
Hargeysa, December 13, 2011 [ras] – Taliska ciidanka maamulka Somaliland ayaa lagga soo xigtay in ciidamo ONLF iyo kuwa Oromo ah oo wada socda ay soo galeen gabalka Awdal iyo Salal, ayna ka hor geeyeen ciidanka maamulka Somaliland. Warkan oo lagu qoray saxaafadaha maamulka Somaliland, ayeyna jirin wali saxaafad kale oo ka hadashay.
Boggaga Internetka ee maamulka Somaliland ayaa qoray shalay in ciidan ONLF iyo Oromo ah oo ay tiradoodu dhantahay 130 dagaal yahan lagu arkay dhulka buuraleyda ah ee gabalada Awdal iyo Salal. Waxaana maamulka Somaliland ay u direen ciidamadooda si ay uga hor tagaan ciidamada la sheegay in ay ka soo degeen xeebaha gabalka Salal sida ay qortay warbaahinta ka soo baxda Hargeysa.
Mudo labo todobaad ah waxaa ka aloosan xasarad labada gabal ee Awdal iyo Salal, taas oo u dhaxaysa beelaha ka soo jeeda labada maamul ee Awdal State iyo Somaliland. Dhawaan ayey shaqaaqooyin ka dhaceen labadan gabal, ka dib kolkii ay ciidamada maamulka Somaliland xasuuqeen dad rayad ah oo hurda.
Taliyihii ciidanka Somaliland Nuux Taani iyo ku xigeenkiisii ayaa shalay Siiraanyo xilkii ciidanka Somaliland ka xayuubiyey, ka dib kolkii lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen xasuuqa ka dhacay Seemaal.
Nuux Taani ayaa isagu diiday in uu u hogaansamo xil ka qaadista Siiraanyo, waxaana la sheegay in maleeshiyo beeshiisa ah ay isku uruursadeen badhtamaha gabalka Awdal iyo Gabiley.
Waxaa kale oo iyana magaalooyinka iyo tuulooyinka gabalka Salal iyo Awdal isku uruursanaya ciidamo beeleed taageersan maamul gabaleedka Somaliyeed ee Awdal state. Waxaa loo badinayaa in ciidama ka soo degay xeebta ay yihiin ciidanka Awdal State oo ka yimid koonfurta Somaliya, kuwaas oo doonaya in ay dejiyaan xaalada gabalada Salal iyo Awdal.
Lama xaqiijin karo in ciidamada maamulka Somaliland ay ku socdaan in ay soo xareeyaan maleeshiyada Nuux Taani iyo kuwa Awdal State ee ku sugan gabaladan, maamulkuna doonayo in uu ka jeediyo saxaafada dhibaatada ka jirta maamulada Awdal state iyo Somaliland.
Ururka ONLF, ayaa isagu heshiis balaadhan oo nabadeed la galay dawlada Ethiopia, wax dhaqdhaqaaq ciidan ahna aan haatan ka wadin gudaha degaanka Somalida [Ogaden] Ethiopia.